ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့သည် တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ ဘရာဇီးနိုင်ငံ ၏ မြို့တော်ဟောင်းဖြစ်သည်။ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး ပင်လယ်အော်၏ အနောက်ဘက်ကမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိ၍ အလွန်သာယာသော သင်္ဘောဆိပ်မြို့လည်း ဖြစ်၏။ တောင်အမေရိကတိုက်တွင် ဗျူနိုအေးရိစ်မြို့မှ လွဲလျှင် လူဦးရေအများဆုံးမြို့ ဖြစ်သည်။ ရီးအိုးဒါဇနရိုပင်လယ်အော်သည် ကုန်းတွင်းဘက်သို့ မိုင် ပေါင်းများစွာ ထိုးဝင်ပြီးလျှင် တောင်တန်းများ ဝိုင်းရံလျက် ရှိ၏။ ပင်လယ်အော်ထဲ၌လည်း ကျွန်းငယ်များရှိသည်။ အချို့ နေရာတို့တွင် တောင်စွယ်တောင်တန်းသည် ပင်လယ်ရေစပ် ထိအောင် သွယ်တန်းလျက်ရှိသဖြင့် သာယာသော ချိုင့်ဝှမ်းများ ကို မြို့တွင်း၌ပင် တွေ့နိုင်လေသည်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့(Rio de Janeiro)
နာမည်ပြောင်(များ): Cidade Maravilhosa (Marvellous City) Princesa Maravilhosa (Marvellous Princess) Cidade dos Brasileiros (City of Brazilians)
ကိုဩဒိနိတ်: 22°54′30″S 43°11′47″W﻿ / ﻿22.90833°S 43.19639°W﻿ / -22.90833; -43.19639ကိုဩဒိနိတ်: 22°54′30″S 43°11′47″W﻿ / ﻿22.90833°S 43.19639°W﻿ / -22.90833; -43.19639
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Kingdom of Portugal
၁၂၂၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၄၈၆.၅ စတုရန်းမိုင်)
၄၅၃၉.၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၇၅၉.၆ စတုရန်းမိုင်)
from ၀ to ၁၀၂၀ မီတာ (from ၀ to ၃၃၄၉ ပေ)
၂၇၀၅.၁/km၂ (၇၀၀၆/sq mi)
တစ်မိုင်ကျော်ရှည်သော ရီးအိုဗရန်ကိုခေါ် လမ်းမကြီးသည် မြို့လယ်ကို ဖြတ်သန်း၍ တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ ခေတ်မီအဆောက် အအုံများ ရံလျက်ရှိသည်။ လမ်းဘေးတစ်လျှောက်တွင် ထန်းမျိုး ဝင် သစ်ပင်များကို စိုက်ပျိုးထား၍ လူသွားလမ်းကို ကျောက် ပြားများဖြင့် အကွက်ဖော်ထားလေသည်။ ပင်လယ်ကမ်း တစ်လျှောက်၌လည်း ဗီးရားမားခေါ် လမ်းမကြီး ရှိ၏။ ထို လမ်းမနှစ်သွယ်ဆုံရာ အနီးတွင် မွန်ရိုးနန်းတော် အမည်ရှိ အဆောက်အအုံရှိသည်။ မြို့တွင်း၌ ပန်းခြံများ၊ ဥယျာဉ်များ ရှိ၍ ၁၈ဝ၈ ခုနှစ်က စတင်စိုက်ပျိုး ပြုစုခဲ့သော ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်မှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ အပင်မျိုး စုံလှသည်။ အမျိုးသား ပြတိုက်၊ သမ္မတစံအိမ်၊ မျူနီစီပယ်ဇာတ်ရုံနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး ဌာနရုံးများသည် မြို့ကျက်သရေဆောင် အဆောက်အအုံများ ဖြစ်ကြသည်။
ရီးအိုဒါဇနမြို့သည် ၂ဝ ရာစုနှစ်မတိုင်မီက ခေတ်နောက် ကျသော ရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့သာ ဖြစ်၏။ မြို့လမ်းများသည် ကျဉ်းမြောင်း၍ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သဖြင့် ရောဂါဘယ ထူပြော၏။ သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း၌လည်း ရွံ့နွံ၊ သဲဖြင့်ပြည့်လျက် ရှိသဖြင့် သင်္ဘောကြီးများ မဆိုက်ကပ်နိုင်ကြချေ။ ကာဖီတမည် တည်းကို အဓိကထား၍ တင်ပို့ရောင်းချ၏။ ၂ဝ ရာစုနှစ်ထဲသို့ ရောက်လာသောအခါ ငွေပေါင်းမြောက်မြားစွာ အကုန်ခံ၍ မြို့ ကွက်နှင့် သင်္ဘောဆိပ်ကို ပြုပြင်ခဲ့ကြလေသည်။ ထိုကြောင့် ယခုအခါ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့သည် အရောင်းအဝယ်ဖြင့် စည်ကား လာရုံမျှမက သင်္ဘောကြီးများဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သော ခေတ်မီ ဆိပ်ကမ်းမြို့လည်း ဖြစ်လာလေသည်။
မြို့တွင် နေထိုင်သူတို့မှာ များသောအားဖြင့် ဗရင်ဂျီဂိုဏ်း ဝင်များ ဖြစ်သည်။ ဗရာဇီးတက္ကသိုလ်ကို ထိုမြို့တွင် ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကက်သလစ်တက္ကသိုလ် ကိုမူ ၁၉၄၁ ခုနှစ်၌ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကက်သလစ် တက္ကသိုလ်ကိုမူ ၁၉၄၁ ခုနှစ်၌ တည်ထောင်သည်။ အခြား စာသင်ကျောင်းများလည်းရှိရာ ပညာသင်ကြားရေး၌ တိုးတက် လျက် ရှိသည်။
ကာဖီကို အများဆုံး တင်ပို့ရောင်းချလျက်ပင် ရှိ၏။ အခြားထွက်ကုန်များမှာ သကြား၊ ပီလောပီနံဥ၊ ဆေးရွက်နှင့် ဆေးလိပ်၊ အသားနှင့် သားရေတို့ ဖြစ်သည်။ လူဦးရေ ၃၃ဝ၇၁၆၃ (၁၉၆၁)ယောက် ရှိသည်။
↑ Vice Mayor Fernando Mac Dowell died on 21 May 2018.
↑ Rio de Janeiro Info ('History')။ paralumun.com။ 27 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။6August 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2019 population estimates. Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE).။ Ibge.gov.br။ 30 May 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့&oldid=525113" မှ ရယူရန်
၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၇:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၇:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။